Gemology ဝေါဟာရ - ကျောက်မျက်အသုံးအနှုန်းများအဘိဓာန်
သူ့ရဲ့ရောင်စုံမိခင်-of-ပုလဲနံရံများအတွက်ဈေးကြီးတခုနားကို-shaped shell ကိုရှိပါတယ်သည့်စားသုံးဆီ univalue mollusk ကထုတ်လုပ်ရောင်စုံ Baroque ပုလဲ။ ဤရွေ့ကားအမေရိက, နယူးဇီလန်နှင့်ဂျပန်ရေပိုင်နက်အတွင်းမှာတွေ့ရှိကြသည်။ ရံဖန်ရံခါ spheroid, သူတို့ကများသောအားဖြင့်ပြားနှင့်နားသို့မဟုတ် tooth- ပုံနေကြတယ်
(ဥပမာ, တစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာ) ကိုတက်ယူသို့မဟုတ်အတွက်ယူသို့မဟုတ် (အလင်းဥပမာ,) တောက်ပသောစွမ်းအင်မှစွမ်းအင်ကိုရရှိ
မှောင်မိုက်ဒေါင်လိုက်လိုင်းတွေ, တပ်သားသို့မဟုတ်ဒေသများ၏ပုံစံ (ကျယ်ပြန့်စုပ်ယူ), တစ်ကျောက်မျက်မှကူးစက်သို့မဟုတ်ထင်ဟပ်ခဲ့သောရူပါရုံကိုမြင်သောအခါအလင်းသည်၎င်း၏ရောင်စဉ်တန်းအစိတ်အပိုင်းများသို့ပြန့်ကြဲခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော spectroscope အဖြစ်တူရိယာကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုဝိသေသအဖြူ-အစိမ်းရောင်ရှိသောသို့မဟုတ် milky ရောင် (စခီ) moonstone
အကူးအပြောင်းဒြပ်စင်ကိုသာကျောက်မျက်ပစ္စည်းကိုတစ်ဦးအသေးအဖှဲညစ်ညူးအဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်သောအခါပစ္စည်း (; chroma = အရောင် allo = အခြား) allochromatic ဖြစ်ပါသည်
သာမန်ရေစီးအားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်စမ်းချောင်းထဲမှာချခဲ့ပြီးသောကျောက်ကိုအပျက်အစီး၏သိုက် (alluvial သိုက်) အတွက်အသုံးပြုယေဘုယျသက်တမ်း, မြစ်, လွင်ပြင်သို့မဟုတ်အိုင်ကုတင်ရေလွှမ်း။
Archimedes နိယာမတစ်ခုကိုယ်ခန္ဓာအရည်ကိုစွဲလန်းနှစ်သက်သောအခါ, ထိုကိုယ်ခန္ဓာပေါ်အရည်များ၏အထက်သို့တွန်းကန်အားအိုးအိမ်မဲ့အရည်၏အလေးချိန်ညီမျှကြောင်းဖော်ပြသည်။ (ထို hydrostatic အလေးချိန်နည်းလမ်းအားဖြင့်တိကျသောဆွဲငင်အား၏ပြဌာန်းခွင့်သည်ဤနိယာမအပေါ်အခြေခံသည်)
အဘယ်သူမျှမကသဘာဝ counterpart (စထရွန်တီ Titanic နှင့် YAG ဥပမာ, အစိန် Simulator) ရှိသည်သောလူလုပ် crystals
အပူ, အစွန်းအထင်း, အပေါ်ယံပိုင်း, impregnation, ကွဲထွက်ခြင်းမှာသို့မဟုတ်လေဆာ-တူးဖော်ခြင်းဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ၏အသွင်အပြင်၏စွမ်းရည်မြှင့်
တစ်ခုတည်းသောကျောက်ဖွဲ့စည်းရန်ခိုင်မြဲသို့မဟုတ်အတူတကွ fused ခဲ့ပြီးသောနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတက်လုပ်မဆိုကျောက်မျက်
Aster အခါးပန်းကိုလေယာဉ်မှအပြိုင် oriented ထည့်သွင်းနှင့်အတူ cabochon en ဖြတ်ခဲ့သည့်ကျောက် aligned အမျှင်သို့မဟုတ် fibrous အခေါင်းပေါက်ထဲကနေ, ယေဘုယျအားဖြင့်လေးသို့မဟုတ်ခြောက်လ rayed တစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်သည်
ထိုကျောက်တွင်ထည့်သွင်းအခြားဓာတ်သတ္တုများပြားသို့မဟုတ်အချပ်ကနေအလင်း၏အားကြီးသော spangled ရောင်ပြန်ဟပ်မှု (aventurine ဖန်တွင်တွေ့မြင်အဖြစ်ဥပမာ, aventurine လင်းကျောက်, aventurine feldspar (sunstone))
symmetry ၏ဒြပ်စင်၏တ symmetry တစ်ခုဝင်ရိုးတစျပြည့်စုံလည်ပတ်၌တူညီသောအသွင်အပြင် 2, 3,4သို့မဟုတ်6ကြိမ် (ဆိုလိုသည်မှာဆက်သသည်အတိုင်းကြည်လင်လှည်နိုင်သည့်အကြောင်းကိုတစ်ဦးကြည်လင်၏အလယ်ဗဟိုတဆင့်တစ်ဦးစိတ်ကူးယဉ်လိုင်းဖြစ်ပါသည် တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူမျက်နှာ) တစ်ချိန်ကပြည့်စုံလည်ပတ်မှာထက်ပိုပြီးအလားတူအနေအထား, ယူထားသော
အမည်,, ပုလဲသဘာဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှု, အဖုအနာသို့မဟုတ် cyst နှစ်ခုစလုံးလျှောက်ထား
basalt, အသုံးအများဆုံး extrusive များမှာမီးသင့်ကျောက်, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မှောင်မိုက် feldspar နှင့် pyroxene (နှင့်အတူသို့မဟုတ် olivine မပါဘဲ) ၏ဖွင့်လုပ်မှောင်မိုက်, ဒဏ်ငွေ-ဘောဇဉ်ကိုကျောက်ဖြစ်ပါတယ်။ texture, ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဓာတ်သတ္တုအကြောင်းအရာအတွက်မူကွဲအပေါ်သို့ မူတည်. ခွဲခြားထားတဲ့အမျိုးပေါင်းတစ်အရေအတွက်ရှိပါတယ်
orthorhombic, monoclinic နှင့် triclinic system များတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအရှည် ၃ ခုရှိသည်။ နှစ်ချက်သောအလင်းပြန်ခြင်းသည်လမ်းကြောင်းအများစုတွင်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းတစ်ခုချင်းစီသီးခြားကျောက်မျက်မျိုးစိတ်များတွင်တိမ်းညွတ်မှုနှင့်ကွဲပြားသောမျက်လုံးနှစ်လုံး (တစ်ခုတည်းသောအလင်းယိုင်ခြင်းလမ်းကြောင်းများ) ရှိလိမ့်မည်။ ဤစနစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောဓာတ်သတ္တုများကို biaxial ဟုလူသိများသည်။ (orthorhombic system တွင် optic axes သည် c ကို (အခြေခံဒေါင်လိုက် ၀ င်ရိုး) တွင်ညီတူညီမျှရှိသည်။ monoclinic နှင့် triclinic တို့တွင် crystal axes နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုမရှိပါ။ )
birefringence (စနှစ်ဆအလင်းယိုင် / DR အဖြစ်ရည်ညွှန်း) တစ်ဦး anisotropic ကျောက်မျက်၏နှစ်ဆအလင်းယိုင်၏ပမာဏကိုအများဆုံးခွဲခြာမှာမျက်စိအလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်းများအကြားကွာခြားချက်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်
(မကြာခဏဘဲဥပုံသို့မဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာ Baroque) Non-nucleated ယဉ်ပုလဲဂျပန်ရှိ Lake Biwa ၏ကမ်းခြေတစ်ဝိုက်မွေးမြူရေး။ အဆိုပါပုလဲအ mussel ၏ခန္ဓာကိုယ်သို့ဝတ်လုံ၏သေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစထည့်ခြင်းဖြင့်ကြီးမားလတ်ဆတ်တဲ့ရေ mussels အတွက်စိုက်ပျိုးကြသည်
ကျောက်မျက်ရတနာရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုထိခိုက်သောအပြစ်အနာအဆာများအတွက်ယေဘုယျသက်တမ်း။ ကျောက်မျက်ဖြတ်ခံရနေစဉ်သို့မဟုတ်ပါကလက်ဝတ်ရတနာအတွက်ပင်ပန်းခံနေစဉ်တစ်ဦးကအပြစ်များသောအားဖြင့်လည်းကောင်း, လူ့လုပ်ရပ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ခြစ်, တွင်းနှင့်ပွန်းစားခြင်းအပြစ်၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားတွေကိုများမှာ
သာ mollusk shell ကိုနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသည့်မူရင်းနာကျင်ကျိန်းစပ်ကျော်ကြီးပြင်းရာတစ်ဦး nacreous အလွှာများကတဦးတည်းဘက်မှာဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ပုလဲ။ ထိုကဲ့သို့သောပုလဲဖြည်ချလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသောအခါ, shell ကိုနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသောဧရိယာ nacre ၏ရှင်းလင်းသောဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဒီရှင်းလင်းသောဘက်လေ့ setting ကိုသဖြင့်ပယ်ပန်းခင်းလမ်းနှင့်ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏
ထက်မြက်၏ကျောက်မျက်အနေဖြင့်မျက်စိအားပြန်လာသောကြောင်းပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းရောင်ပြန်ဟပ်အလင်း၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အလင်း၏ပမာဏကိုကဆုံးဖြတ်အဖြစ်နောက်တစ်နည်းကကျောက်မျက်ရတနာ၏အရောင်အဝါ (ဘဝ) အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်ကျောက်ရှုထောငျ့၏နောက်ကျောကနေပြန်မျက်စိမှရောင်ပြန်ဟပ်
ကြွပ်ဆတ်က၎င်း၏ခိုင်မာသောရှိနေသော်လည်းကျိုး, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု (zircon ကုသဥပမာအပူ) မှဖြစ်ပေါ်နိုင်စေသည်သည့်ကျောက်မျက်အတွက်အားနည်းခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်
စုံလင်သောကျောက်သလင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှမျက်နှာ (ဆိုလိုသည်မှာ, တိုင်းမျက်နှာ, အလားတူဆန့်ကျင်ဘက်များနှင့်အပြိုင်ကြောင်းအခြားမျက်နှာရှိပါတယ်) လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်အကြည်လင်၏အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်အလားတူမျက်နှာအခါ symmetry ၏ဒြပ်စင်၏တ symmetry ၏ဗဟိုပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါသည်
oriented အပြိုင် fibrous ပါဝင်မှုသို့မဟုတ် (ကြောင်ရဲ့မျက်စိ) လိုင်ကနေရောင်ပြန်ဟပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှု။ တစ်ခုတည်းသောအလင်းတန်းတစ်ချောင်းသည်ပါဝင်မှုများ၏လမ်းကြောင်းကိုထောင့်မှန်ဖြင့်တွေ့ရပြီးယင်းသည် cabochon en ဖြတ်ထားသောကျောက်တုံးများဖြင့် overhead light source တစ်ခုအောက်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
(690nm အနီး) တွင်နက်ရှိုင်းသောအနီနှင့် (570nm အနီး) အဝါရောင်အစိမ်းရောင်အ: filter များပေါင်းစပ်ပါဝင်သောထိုတူရိယာ, ဒါကြောင့်ရောင်စဉ်၏နှစ်ခုသာကျဉ်းမြောင်းတဲ့အပိုင်းကတဆင့်မြင်နိုင်ဖြစ်ခွင့်ပြုဆောက်လုပ်ထားသည်။ ဒါဟာကျောက်ခဲတို့ကိုထဲမှာ (chrome) ဆိုးဆေးများ၏ထောက်လှမ်းဘို့နဲ့သူတို့ရဲ့ဘုံတုပမှအချို့သောကျောက်မျက်ပစ္စည်းများခွဲထုတ်ဘို့, အချို့သောကျောက်မျက်အတွက်မှာ chrome သို့မဟုတ်ဘော့၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြအတွက်အသုံးဝင်သည်။ သတိပေးချက်: သာသတိပေးခကျြကိုနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်အသုံးပြုပါ။ သက်သေအထောက်အထားအခြားစမ်းသပ်မှုအပျေါမှီခိုဖြစ်ပါသည်
(အရောင်အေးဂျင့်) ။ ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုး၏အရောင်အတွက်တာဝန်ရှိသောမော်လီကျူး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ ၎င်းသည် idiochromatic ကျောက်များ၌ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှုတွင်မရှိမဖြစ်ပါဝင်သောအရာများသို့မဟုတ် allochromatic ကျောက်တုံးများတွင်မတော်တဆထိခိုက်မှုများပါဝင်သည်။
သက်တမ်းတစ်ကျောက်မျက်ဆို internai ချွတ်ယွင်းသို့မဟုတ်မမှန် (အပါအဝင်) အနေဖြင့်ဆွေမျိုးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုကျောက်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတန်းစဉ်းစားကြသောအခါအဓိပ္ပါယ်လည်းမျက်နှာပြင်ချို့ယွင်းချက် (အညစ်အကြေး) ထည့်သွင်းရန်တိုးချဲ့စေခြင်းငှါ
crystals ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကျောက် internai အဆောက်အဦတွင်တွေ့မြင်အရောင်များ၏အကြမ်းအားဖြင့်အပြိုင်အလြောကျတပျဖှဲ့ (ရရှိနိုင်ပါဓာတုပစ္စည်းများ, အရည်, အပူချိန်, ဖိအားများနှင့်အခြားအချက်များအတွက်ကွဲပြားမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းအဆင့်၏ညွှန်ပြ)
အဖြူရောင်အလင်း (အနီ၊ လိမ္မော်၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ ခရမ်းရောင်) ခွဲခြားနိုင်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအမြင်အာရုံအမြင်နှင့်နေရောင်ခြည်တွင်မတွေ့ရသောခရမ်းရောင်၏အာရုံကိုအမြင်အာရုံရှုမြင်ခြင်း။ အရောင် hue, ရွှဲနှင့်သေံအားဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာ၏ကိုယ်ခန္ဓာအရောင်သည်မြင်နိုင်သောအလင်း၏အချို့လှိုင်းအလျားများ၏စုပ်ယူမှုကြောင့်၎င်းကိုမြင်နိုင်သည့်အလင်းမှရရှိသည်။ အရောင်ကိုလည်းအရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြား, အလင်း၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်ချောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါသည်
အရောင်ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအညစ်အကြေးများ၏ကိုက်ညီမှုမရှိပြင်းအားကြောင့်ကြည်လင်၏တိုးတက်မှုကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အရောင်အတွက်မူကွဲ (ခညျြနှောငျသို့မဟုတ်ဇုန်) ပုံမှန်အားဖြင့်တည်ဆဲကြည်လင်မျက်နှာများနောက်သို့လိုက်ရန်ရှုမြင်ကြသည်
ကြောင့် idiochromatic နှင့် allochromatic ကျောက်ခဲတို့ကိုထဲမှာအကူးအပြောင်းဒြပ်စင် (chrome, ကိုဘော့, ကြေးနီ, ဗန်နာဒီယမ်, မန်းဂနိစ်, သံ, နီကယ်, တိုက်တေနီယမ်) ၏ရှေ့တော်မှအလင်း၏ရွေးချယ်စုပ်ယူ
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအကြီးအကျယ်ရန်အလားတူအဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်နှင့် crystals ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအမှုန် (ဥပမာ, fme-grained ကျောက်စိမ်းကျောက်စိမ်း) ၏အဘယ်သူမျှမနိမိတ်လက္ခဏာကိုပြရသောအခါအထူးသဖြင့်လျှောက်ထားသည်
ပန်းရောင်ပုလဲ: ကြီးစွာသော conch ထံမှရရှိသောပုလဲ, တစ်ဦး univalve mollusk, California နဲ့မက္ကစီကိုပင်လယ်ကွေ့ဖလော်ရီဒါကမ်းလွန်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားပုလဲအရောင်အတွက် (ပန်းရောင်လိမ္မော်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူ) ပုံမှန်အားဖြင့်ပန်းရောင်နှင့် nacreous အပေါ်ယံပိုင်း၏မရှိခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနေကြတယ်
ကြောင့်ကျောက်၏အထံတော်မှအဆက်အသွယ်ဇုန်တွင်သို့မဟုတ်အနီး Pre-ရှိပြီးသားကျောက်တွင်းထွက်အကြောင်းအရာများ၏ recrystallization
ထိုတစ်ဦးချင်းစီတစ်ဘုံလေယာဉ် (ထိုအမွှာလေယာဉ်) တလျှောက်အဆက်အသွယ်၌ရှိကြ၏သောကျောက်သလင်း Twin အမျိုးအစား။ ထိုကဲ့သို့သောကြည်လင်၏အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဝင်ရိုး (ထိုအမွှာဝင်ရိုး) အကြောင်း 180 ° (တစ်နှစ်ခွဲအလှည့်) မှတဆင့်လှည်လျှင်ထို့နောက်နှစ်ခုရှက်တစ်ဦးချင်းစီကြည်လင်၏ပုံသဏ္ဍာန်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ဒါနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အဆိုပါအဆက်အသွယ်အမွှာနှစ်ဦးပုံစံများတည်ရှိ: ဒါကြောင့်တစ်တစ်ဝက်သာမန်ကြည်လင်၏ပုံစံရရှိသောဖြစ်ပါတယ်, join ၏လေယာဉ်အကြောင်း2°လှည်လျှင်တစ်ဦးကြည်လင်၏ 180 ရှက်ပြောင်းပြန်အမိန့်ရှိကြ၏အမွှာ-ဘယ်မှာတစ်ခုတည်းအဆက်အသွယ်; ထပ်ခါတလဲလဲ, polysynthetic သို့မဟုတ် lammelar အမွှာ-ဟာအလွန်ပါးလွှာသောပန်းကန်ထဲမှာမကြာခဏအဆက်အသွယ်အမွှာတစ်ဦးစီးရီးပါဝင်ကြည်လင် Twin အမျိုးအစား။ ဤရွေ့ကား (corundum နှင့် feldspar ၌တှေ့အဖြစ်ဥပမာ) သူတို့ရဲ့ချက်ချင်းအိမျနီးခငျြးမြားဆနျ့ကငျြဘတိမ်းညွတ်အတွက်စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ interpenetrant အမွှာလည်းကြည့်ရှုပါ
ဖြစ်ပွားမှု၏ထောင့်ရှိရာအလွန်ရှားပါးတဲ့အလတ်စားတစ်ခုတာတော့သိပ်သည်းကနေခရီးသွားလာသောအလင်း၏တစ်ဦးရောင်ခြည် (ဆိုလိုသည်မှာ, ကအဆက်အသွယ်နှစ်ခုမီဒီယာ၏မျက်နှာပြင် skims) ကိုပုံမှန် 90 °မှာ refracted ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက်: ဖြစ်ပွားမှု၏ဤထောင့်အပေါ်မဆိုထပ်မံတိုးလာသည့် refracted ရောင်ခြည်ပြန်ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၏နိယာမအားဖြင့်လိုက်နာမယ်လို့ဘယ်မှာမူရင်းအလတ်စားသို့ပြန်ရောက်စေမယ်လို့ (ဆိုလိုသည်မှာ, ကလုံးဝပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်။ )
(crypto = hidden) ။ သက်တမ်းမကြာခဏ Sub-ဏုတစ်ဦးအေးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖွဲ့စည်းသေးငယ်တဲ့ crystals တစ်ခုကြီးမားအရေအတွက်ပါဝင်သည်ဟုပစ္စည်းကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Sub-ဏုကြည်လင်စုစုပေါင်းအချည်းစည်းမျက်စိမှ amorphous ပေါ်လာနိုင်
တစ်ဦးကြည်လင်အချိုးကျစီစဉ်ပေးလေယာဉ် (ပြားချပ်ချပ်) မျက်နှာများအားဖြင့်ကာရံထားခြင်းခံရသည်တစ်ဦးအမိန့် internai အနုမြူဗုံးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပြင်ပပုံစံဖြင့်အစိုင်အခဲတစ်ခုဓာတုဗေဒယူနီဖောင်းဖြစ်ပါသည်
တစ်ဦးကြည်လင်ပုံစံကိုအလားတူ crystallographic ပုဆိန် (ဥပမာ, ပိရမစ်, Prism, pinacoid, အမိုးခုံး) နှင့်ဆက်စပ်သောသောသူတို့အားမျက်နှာများ ail ပါဝင်ပါသည်
များသောအားဖြင့်ပေါ်ပေါက်သောသတ္တုဓာတ်အတွက်ကြည်လင်ပုံစံမျိုးစုံ (ပုံစံပေါင်းမျက်နှာပြင်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ) သူတို့ရဲ့ကြည်လင်အလေ့အထများဟုခေါ်ကြသည်
ကျောက်သလင်းပါဝင်နိုင်သူတို့ရဲ့ရှိခြင်းအတော်လေး angular ထောင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖြောင့်အနားနေဖြင့်သတ်မှတ်ကြသည်။ မညီမညာဖြစ်နေသောအနားနှင့်အနည်းငယ် rounded ပုံစံများကိုလည်းထည့်သွင်း၏ reabsorption ကြောင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်ကြသည်။ (darkfield illumination အောက်မှာကြည့်ရှုအားပေးကြသောအခါကြည်လင်ပါဝင်နိုင်များသောအားဖြင့်အိမ်ရှင်နောက်ခံဆန့်ကျင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်ပြပါ။ သူတို့ကကူး polarization ကို အသုံးပြု. check လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ )
ကျောက်သလင်း symmetry အအနုမြူဗုံးဖွဲ့စည်းပုံမှာ၏မျှမျှတတပုံစံကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာပစ္စည်းဥစ္စာများ၏အမိန့်ပြည်တွင်းရေးအစီအစဉ်ညွှန်ပြကြောင်းအလားတူကြည်လင်မျက်နှာများ၏တိကျသောမျိုးပွား (ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုပြန်လုပ်) (အနား, ထောင့်) ဖြစ်ပါသည်။
ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်ပုံဆောင်ခဲပစ္စည်းကိုအဘယ်သူ၏အိုင်းယွန်း, အက်တမ်သို့မဟုတ်မော်လီကျူးအနေနဲ့စနစ်တကျဖက်ရှင်အတွက်စီစဉ်ပေးကြသည်အစိုင်အခဲတစ်ခုဓာတ်သတ္တုဖြစ်ပါတယ်။ အလေ့အကျင့်ထဲမှာ, သက်တမ်းမကြာခဏပုံမှန်တည်ဆောက်ပုံနှင့် directional ဂုဏ်သတ္တိများသော်လည်းမသေချာပေါက်ပြင်ပဂျီဩမေတြီပုံသဏ္ဌာန်ပိုင်သောသူတ္ထုများကိုဖော်ပြရန်ရန်အသုံးပြုသည်
အကြည်လင်၏ symmetry ဆက်စပ်. အချို့အတိအကျလမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာစံပြကြည်လင်။ သူတို့ကဇာစ်မြစ်ဟုခေါ်သည့်အချက်မှာကြည်လင်၏အလယ်ဗဟိုတွင်ဆုံမှတ်ဖြတ်သန်း။ (သူတို့ကအမျိုးမျိုးသောမျက်နှာများ၏ဆွေမျိုးအကွာအဝေးမြားနှငျ့စိတျကိုတိုင်းတာနိုင်သည့်ထံမှရည်ညွှန်း၏လိုင်းများဖြစ်ကြသည်။ )
ယဉ်ပုလဲလုံးဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစေသော Pearly ဖွဲ့စည်းမှုများမှာ
အတန်ဖိုးရှိရှိ mollusks ၏အတွင်းပိုင်းသို့လူ့အေဂျင်စီ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤသည်နှင့်အတူဖြစ်စေသို့မဟုတ်တစ်နျူကလိယမပါဘဲယဉ်ပုလဲသက်ဆိုင်
ပုလဲ mollusk ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဖွဲ့စည်းထားပါတယ်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတွက် spheroid သောပုလဲ
သစ်ပင်နှင့်တူသောသို့မဟုတ်ရေညှိကဲ့သို့သောအက်ကြောင်းများဖြည့်ခြင်း (မတူညီသောပစ္စည်းများပါ ၀ င်မှုသည်ပြိုကွဲသွားနိုင်သည် - ပုံမှန်အားဖြင့်သံအောက်ဆိုဒ်)
glassy တောက်ပခြင်းနှင့် transluceny ဆုံးရှုံးရန်။ (meta ကျောက်စိမ်းဟုခေါ်သည့်ဖန်ထုတ်ပစ္စည်းတွင် - အစပြုတီထွင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်)
အ dichroscope တစ်ကြိမ်, ကျောက်မျက်သတ္တုဓာတ်၏ pleochroic သက်ရောက်မှုများလေ့လာခံရဖို့အရောင်များ၏အရောင်နှစ်မျိုးသို့မဟုတ်အရိပ်ခွင့်ပြုသည့်တူရိယာဖြစ်ပါတယ်
အလင်း၏ diffraction အလင်းကိုသေးငယ်တဲ့ aperture သို့မဟုတ်သည့်အခါအလင်းလှိုင်းတံပိုး, ဥပမာ (ထိုကစားကွဲပြားခြားနား refracting တ္ထုများအကြားတစ်ခုအစွန်းလွန်ဖြတ်သန်းကဲ့သို့ဖြူအလင်းသည်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအရောင်များသို့ (အုပ်စုခွဲ) တက်ကျိုးပဲ့သောအလငျး၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတစ်ခုအထူးပြုပုံစံ ) အဖိုးတန် opal တွင်တွေ့မြင်အရောင်၏
dispersion ဆိုသည်မှာအလင်းဖြာထားသောမျက်နှာပြင်နှစ်ခုကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါအလင်းပြန်ခြင်း (bending of light) အားဖြင့်ရောင်စဉ်ဖြာရောင်ရောင်စဉ်အဖြူရောင်အလင်းကိုခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောက်မျက်များတွင်၎င်းကို 'မီး' အဖြစ်မကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်
anisotropic - directional optical ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြသသောဓာတ်သတ္တုများ (ဥပမာ - tetragonal, hexagonal trigonal, orthorhombic, monoclinic နှင့် triclinic systems ရှိကျောက်တုံးများ)
symmetry ၏ဒြပ်စင်ခုနစ်လုံးကိုကြည်လင်စနစ်များအတွက်လျှို့ဝှက်-စုံလုံ၏ထုံးစံရှိပါတယ်။ သူတို့ကကြည်လင်အသွင်သဏ္ဌာန်၏အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများခွဲခြားနှင့်ဖော်ပြဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ဖို့ devices များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ (တစ်ဦးချင်းစာရင်းအောက်မှာ definitions ကိုကြည့်ပါ) symmetry ၏လေယာဉ်, symmetry နှင့် symmetry တစ်စင်တာတစ်ခုဝင်ရိုးပါဝင်
eluvial သိုက်မြစ်များအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလျှက်မပါဘဲဗိုလ်ခြေကိုကျောက်ထဲကနေ (ထွက်ရာသီဥတု) ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်နှင့် (ရာအရပျ၌) situ ၌တည်ခဲ့သောကြောကျအပျက်အစီးများ (ကျောက်စရစ်ခဲ) ၏ရှိရေး
ချွတ်ပေးသို့မဟုတ်ထွက် (ဥပမာ, အလင်း) မှ
သလင်းကျောက်၏လက်ဝဲဘက်နှင့်လက်ျာလက်ကိုလိမ်ကြီးထွားရန်, နှင့်၎င်း၏မြို့ပတ်ရထား polarization ကိုမှမြင့်တက်ပေးသောလင်းကျောက်၏မော်လီကျူးတည်ဆောက်ပုံ။ (မှတ်ချက်: အပြင်ပပုံစံပေါ်တွင်မကြာခဏမြင်နိုင်သောသေးငယ်တဲ့ auxillary မျက်နှာများ၏နေရာချထားအကြည်လင်၏လက်ဝဲသို့မဟုတ်လက်ယာသန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ကူညီ)
ခေတ်ပြိုင်ပါဝင်နိုင် post ။ အိမ်ရှင်ကြည်လင်၏ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောသူများသည်။ ဤရွေ့ကား exsolution (corundum အတွက်ဥပမာ, သော Rutile ပိုး) ကဖွဲ့စည်းတွင်းနှင့်သတ္တုပါဝင်နိုင်အမျိုးမျိုးပါဝင်; , etc, ကျိုးပြည့်ဝကျောက်မျက်အတွက်အကြွင်းအကျန်ရေနံ / opticon ဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
သတ္တုဓာတ်၏လောင်း။ သတ္တုဓာတ်တချို့ကစွမ်းမြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာအစိုင်အခဲဖြေရှင်းချက်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်အနိမ့်သောအပူချိန်မှာမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာ။ ဤသူဖြည်းဖြည်းချင်းအအေးတဲ့အခါအိမ်ရှင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအေးနှင့်ကန်ထရိုက်တဓာတ်သတ္တုစာသားသူတို့ (corundum အတွက်ဥပမာ, သော Rutile အပ် (ပိုး)) crystallize ဘယ်မှာလစ်လပ်နေရာများသို့အညစ်အကြေးဖျစ်ညှစ်ထွက်အတင်းအကြပ်စေခြင်းငှါ
မျိုးသုဉ်းမျက်စိမှပြန်လာသောအလင်း၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ကျောက်ကိုမှောင်မိုက်ပေါ်လာဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့် billiance ချို့တဲ့ရသောအမှုသည်
ရှုထောငျ့ကျောက်မျက်သရဖူ (အခါးပန်းကိုအထက်ထိပ်ဆုံးသောအဘို့ကို), စားပွဲတစ်ခု (ထိုဦးရစ်သရဖူကို၏ဗဟိုအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်), ခါးပန်း (အကြီးမြတ်ဆုံးပတ်လည်အတိုင်းအတာသို့မဟုတ်ပြင်ပနယ်နိမိတ်နှင့်အတူကျောက်အပိုင်း), (အောက်ဆုံးအပိုင်းခါးပန်းအောက်တဲများ ) ။ အားလုံးအခြားရှုထောငျ့အသုံးပြုတဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းစတိုင်ပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့ရဲ့အရွယ်အစား, အကြိမ်ရေသို့မဟုတ်ပင်တည်ရှိကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စံခြေလှမ်း-cut (မြဖြတ်) ကျောက်ခဲတို့ကိုထဲမှာ culet (ထိုတဲ၏ခြေရင်းမှာသေးငယ်တဲ့အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်) တစ်ဦး Keel လိုင်း (ထိုတဲ၏အောက်ခြေ၏ဗဟိုတလျှောက်တိုးချဲ့ရှည်လျားလိုင်း) ဖြင့်အစားထိုးသည်
ပုံမှန်အားဖြင့်လမ်းကြောင်းများ intercommunicating ၏ဒဏ်ငွေလှံတံကဲ့သို့ပုဒ်မ (များသောအားဖြင့်အရည်ပြည့်ဝ) ၏လူအစုအဝေးအဖြစ်ပေါ်လာရာတစ်မိနစ်အခေါင်းပေါက်၏လေယာဉ်။
အမည်၌မဲဆန္ဒနယ် crystals အပ်-shaped ရှိရာပစ္စည်းကို (ဥပမာ, ကျောက်ဂွမ်း, nephrite ကျောက်စိမ်း) အားပေး
ဤသူလည်းအနာပျောက်စေသောအတောင်တော်အမွေးအဖြစ်လူသိများပြီးလက်ဗွေရာပုံနဲ့တူတဲ့အရည်အပြည့်ဖြည်လိုင်းများနှင့်မျက်ရည်စက်လေးတွေ၏ကွန်ရက်များ interconnecting ထားရှိရေးစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ အများအားဖြင့်ဓာတ်သတ္တုဖြေရှင်းချက်၏ရလဒ်တဖြည်းဖြည်းတစ်ပြီးသားဖွဲ့စည်းကြည်လင်နေတဲ့ Pre-ရှိပြီးသားအက်ကွဲသို့ filtering နှင့်တွင်းငြိမ်းစေလျက်။ ထိုကဲ့သို့သော features တွေဖြစ်ပွားနိုင်သည်ရှိရာအခြားအခွအေနေအပူအပူဆေးကုနေစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဗွေကုသပတ္တမြားအတွက်ဘုံရှိပါတယ်
finish ကိုကျောက်မျက်များ၏ရှုထောငျ့အရည်အသွေးအရညျညှနျးနဲ့ထွန်းလင်း, regularity, အသီးအသီးအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်၏ပြားချပ်ချပ်၏ဒီဂရီအားဖြင့်မသိနိုင်
ချောင်းတိုတောင်းလှိုင်းအလျား (မြင့်မားသောစွမ်းအင်) ၏မြင်နိုင်သို့မဟုတ်မမြင်ရတဲ့ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြကြောင်းကျောက်မျက်ရတနာများကမြင်နိုင်အလင်း၏ထုတ်လွှတ်သည်
ကျိုးနေတဲ့ကြောကျခဲတစ်မမှန် chip ကိုသို့မဟုတ်ချိုးဖြစ်ပါသည်
မဆိုကြင်နာတဲ့ကျောက်မြတ်, (ပုလဲအဆုံးစွန်သောလိုအပ်ချက်တစ်ခုကလွဲရင်သည်) ဖြတ်အဆင်တန်ဆာအဘို့ပွတ်။ ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်တစ်ဦးကကျောက်မျက်အလှတရားကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတကြာရှည်ခံမှုနှင့်ရှားပါးသည်
ဟူသောဝေါဟာရဖန် amorphous ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းရေးအတွက်ရရှိလာတဲ့, တွင်းထွက်ပစ္စည်းဝတ္ထုများ၏အရည်ပျော်နှင့်လျင်မြန်စွာအအေးအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသောဝတ္ထုများမှလျှောက်ထားသည်။ Glass ကို (တခါတရံငါးပိအဖြစ်ရည်ညွှန်း, manmade) အတုဖြစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုခဲ, သဘာဝဥပမာ obsidian (မီးတောင်ဖန်), tektites (ဥက္ကာနဲ့ splash ထုတ်ကုန်ဖြစ်စဉ်းစားနိုင်ပါသည်)
နှမ်းဖတ်ကျောက်အများအားဖြင့်သလင်းကျောက်, feldspar နှင့် MICA ၏ဖွင့်လုပ်တစ်ဦးအလင်းအရောင်, ကြမ်း-စပါးကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောများမှာမီးသင့်ကျောက်သည်
တစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှုအက်ကွဲ (s) ကဝိုင်းရံကြည်လင်ပါဝင်။ ဤရွေ့ကားလည်း (များသောအားဖြင့် zircon သော) ကိုထည့်သွင်းကျောက်သလင်းကနေထွက်ရှိတဲ့နှစ်ခုအတောင်ပံနှင့်အတူလိပ်ပြာတူစေခြင်းငှါ
မာကျောမှုသည်သတ္တုဓာတ်သည်ကုတ်ခြစ်ခြင်း (ပွန်းပဲ့ခြင်း) ကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်သည့်စွမ်းအားဖြစ်သည်။ Moh ၏စကေးကိုလည်းကြည့်ပါ
အရည်အချိုးသို့ဝင်နှင့်ကျောက်သလင်းအတူတူပြန်ကြီးပွါးအနာကိုငြိမ်းစေဒါကိုတော့ (ဒါကိုတော့သို့မဟုတ် cleavages) ။ မကြာခဏအရည်၏ဝေမျှ feathery သို့မဟုတ်လက်ဗွေရာတူပုံစံများ (တခါတရံသံ-စွန်းထင်း) ဖြစ်စေတဲ့အခေါင်းပေါက်နှင့်ချန်နယ်များပိတ်မိနေကြတယ်
hue သည်အရောင်၏အမည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အဝါ၊ အဝါ၊ အပြာ၊ Hue ကနေခရမ်းရောင်တွင်မတွေ့ရသောခရမ်းရောင် (အနီရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်အကြား) ၏အာရုံကိုရည်ညွှန်းသည်
ရေနှင့်အခြားမတည်ငြိမ်သောပစ္စည်းများထဲတွင်ကြွယ်ဝသောကျောက်ထဲကနေများသောအားဖြင့်များမှာမီးသင့်စုစည်းပြီး၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်, ချကျောက်တုံးများ။ နည်ကျောက်ဆောင်နှင့်ပုံစံကိုကြည်လင်အတွက်ကွာဟချက်များနှင့်တွင်းတဆင့်သတ္တုကြွယ်ဝသောဖြေရှင်းနည်းများ filter ကို၏ hydrothermal သွေးပြန်ကြောကျောက်၌အခေါင်းပေါက်စီတန်း
အကူးအပြောင်းဒြပ်စင်တစ်ခုကျောက်မျက်ပစ္စည်းကိုတစ်ဦးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမဲဆန္ဒနယ်ဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, ကျောက်မျက်ပစ္စည်း (idio = မိမိကိုယ်ကို, chroma = အရောင်) idiochromatic ဖြစ်ပါသည်
သင့်လျော်သောအရည်ပါဝင်တဲ့အဘို့အသေးငယ်တဲ့ဖန်ခွက်ကလာပ်စည်း။ တစ်နှစ်မြှုပ်ခြင်းဆဲလ်သုံးပြီးနောက်ကွယ်မှနိယာမအရည်၏ယိုင်ညွှန်းကိန်းကျောက်ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်, အပိုလွယ်ကူကထိုကျောက်သို့ကြည့်ရှုခြင်းငှါဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နီးပါးမည်သည့်အရောင်အရည်, ပင်ရေ, မျက်နှာပြင်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတို့ကိုခုတ်လှဲခြင်း, ကြည့်ရှုပါဝင်နိုင်တာပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်
ဒါကြောင့်မူလကဖွဲ့စည်းခဲ့သို့မဟုတ်အပ်နှံခဲ့သည်ရှိရာအနေအထားတွင်ကြုံတွေ့ပစ္စည်းကို (စာသားရာအရပျ၌) situ ၌တွေ့ခံရဖို့ကပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်
ကျောက်မျက်ရတနာအတွင်းမည်သည့်ချွတ်ယွင်းသို့မဟုတ်မမှန်များအတွက်ယေဘုယျသက်တမ်း။ အားလုံးပါဝင်နိုင်သုံးအမျိုးမျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်: Solid-နှစ်ဦးစလုံးပုံဆောင်ခဲ (ဥပမာ, နီလာအတွက် zircon) သို့မဟုတ် Non-ပုံဆောင်ခဲ (peridot အတွက်ဥပမာ, သဘာဝဖန်) ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ အခေါင်းပေါက်-ထိုအိမ်ရှင်ကျောက်မျက်တိုးတက်မှုနှုန်း (မူလတန်းအပါအဝင်) ကာလအတွင်းဖွဲ့စည်း, သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း (အလယ်တန်းအပါအဝင်) ဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြစ်စေ type ကိုအရည်, ဓာတ်ငွေ့နှင့်သို့မဟုတ်အစိုင်အခဲများမဆိုပေါင်းစပ်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းငှါ။ နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအဆင့်ရှိသူ multiphase ချေါကြသည်။ ကြီးထွားမှုဖြစ်ရပ်-အရောင်ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် Twin တိုးတက်မှုနှုန်းဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးဥပမာ
အနီရောင်နဲ့ဓါတ်ကင်ခြင်း၏ဤအကွာအဝေးကိုအောက်တွင်အနီအောက်ရောင်ခြည်နည်းလမ်းမရှိတော့အနီရောင်အလင်း၏ 700nm ထက်ဖြစ်ကြောင်းလှိုင်းအလျားနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Skip ရိုက်တဲ့အခါနွေးထွေးမှုတစ်ခုအလွင်ပင်အရသာထုတ်လုပ်သောကွောငျ့အနီအောက်ရောင်ခြည်ယေဘုယျအားဖြင့်အပူအဖြစ်လူသိများသည်
တူညီသောလမ်းကြောင်းအတွက်, ဒါပေမယ့်အဆင့်ထဲက (ခြေလှမ်း) ခရီးသွားလာနှစ်ခုရောင်ခြည်, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တဦးတည်းအလငျး၏အခြားဖြစ်စေတဲ့စုစုပေါင်းမျိုးသုဉ်းဒါမှမဟုတ်တယောက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအရောင်အဆင်း၏ Pre-ကြီးစိုးနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဘယ်မှာ
ဤသူကို double ယိုင်သတ္တုဓာတ် Polarized အလငျး၏ convergence ရောင်ခြည်အတွက်အပြိုင်မျက်နှာများမှတဆင့်ကြည့်ရှုအားပေးကြသောအခါမြင်ကြ optical သက်ရောက်မှုများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကကျောက် optical ဇာတ်ကောင်ကိုရည်မှတ်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်မတတ်နိုင်
နှစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီဒါကြောင့်သူတို့ (မကြာခဏလက်ဝါးကပ်တိုင်သို့မဟုတ်ကြယ်ကျောက်ခဲတို့ကိုထုတ်လုပ်) အချင်းချင်းထွင်းဖောက်ကြပေါ်လာကြောင်းအတူတကွစိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည့်အတွက်ကြည်လင် Twin အမျိုးအစား
အလင်းပါးလွှာသောရုပ်ရှင်ကားမှသို့မဟုတ်အဖိုးတန် opal ၏ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းပုံမှာမှလည်းကောင်းရောင်ပြန်ဟပ်သောအခါအရောင်၏လျှံသို့မဟုတ်ကစားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသို့မဟုတ် diffraction ကထုတ်လုပ်အရောင်များ၏အရောင်သို့မဟုတ်စီးရီးဖော်ပြထားတယ်
ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုအတွက်တူညီတဲ့ valence ၏အခြားတဓာတုဒြပ်စင်များအစားထိုး။ ဤသည်စီးရီး၏အင်္ဂါ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအတွက်ကျယ်ပြန့်မူကွဲများတွင်ရလဒ်များ။ valence: အလားတူဓာတုသဘောသဘာဝတွင် ionic အချင်းဝက်၏
သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်သော Non- nucleated ရေချိုပုလဲများသည် non-nucleated ယဉ်ကျေးမှုပုလဲများဖယ်ရှားပြီးနောက်ရေထဲသို့ပြန်ရောက်သည့်အခါ mollusk တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုများသောအားဖြင့်သေးငယ်သည့်အဏ္ဏဝါမျိုးစေ့ pearis နှင့်မရောထွေးသင့်ပါ။ ရေချို `keshi” ကိုသာခေါ်ဆိုခြင်းခံရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အတုနျူကလိယမှမစိုက်ပျိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ `seedless 'ပုလဲများအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ Biwa ပုလဲများကိုလည်းကြည့်ပါ
Keshi ပုလဲ (အဏ္ဏဝါ)
ဂျပန်သည်မျိုးစေ့ပုလဲများကို“ keshi” (ဘိန်းများ) ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ဤနေရာတွင်ဆက်စပ်မှုသည်ဘိန်းစေ့အရွယ်အစားနှင့်သဘာဝအလျောက်ဖွဲ့စည်းထားသောပုလဲအကြားရှိသည်
ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိန်းဂဏန်းများ၏ကြည့်ရှုအဆင်ပြေချောမွေ့ကူညီပေးသည်သောပြင်းပြင်းထန်ထန် convergence မှန်ဘီလူးနှင့်အတူတပ်ဆင်တဲ့ polariscope
polysynthetic Twin အားဖြင့်စေ၏။ လိုက်ကာသို့မဟုတ်ပွင့်လင်းငါးလိုင်းအဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစ (လမ်းညွန်တွေ့ဆုံရန်ဘယ်မှာ corundum အတွက်, ဥပမာ) ထောင့်ရှိတွေ့ဆုံရန်ထင်ရှားစေခြင်းငှါ
အဓိကအားဖြင့် decomposed basait မှဆင်းသက်လာသော (ကြောကျအပိုင်းအစများနှင့်အသီးအရွက်များ၏ရေးစပ်) မြေပြင်ပစ္စည်းကို (ကအပူပိုင်းရာသီဥတုထဲမှာဓါတုဗေဒရာသီဥတုဒါဏ်၏သက်ရောက်မှုရန်အလွန်ပွင့်လင်းသောသံနှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့ဒဏ်ငွေစပါးကိုမှောင်မိုက်မီးတောင်ကျောက်,)
တစ်ပုံစံသို့မဟုတ်အခြားအတွက်ပိုလျှံစွမ်းအင်ရယူအပေါ်သို့ပစ္စည်းဥစ္စာများကမြင်နိုင် "အအေး" အလင်း၏ချွတ်ပေးခြင်းများအတွက်ယေဘုယျအသုံးအနှုန်း။ နိယာမ ၅ ခုကိုတောက်ပသောဖြစ်ရပ်များမှာခမီမီလင်းစီစစ် (ဓာတုပြောင်းလဲမှု၏ရလဒ်)၊ Tribo-luminescence (ပွတ်တိုက်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်)၊ thermo-luminescence (အပူဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်)၊ ဓာတ်ပုံအလင်းရှိခြင်း (ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအင်ကိုမြင်နိုင်သို့မဟုတ်မမြင်ရသောရောင်ခြည်များမှထုတ်လုပ်သည်) ။ လှိုင်းအလျား) နှင့် cathodoluminescence (လေဟာနယ်အခန်းထဲရှိအီလက်ထရွန်ရောင်ခြည်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှရလဒ်များ)
တောက်ပသောကျောက်၏မျက်နှာပြင်မှရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းအလင်း၏အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါဝေါဟာရများကိုကျောက်မျက်တောက်ပဖော်ပြရန်အသုံးပြုကြသည်: သတ္တု: ဒီလိုပါပဲသတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်းများကပြသမွငျ့မားတောက်ပ။ adamantine: မြင့်မားမျက်နှာပြင်အလင်းပြန်။ ထည်လုပ်ခြင်း: ကျောက်မျက်များ၏အများစု၏ပုံမှန်ဖန်ခွက်ကဲ့သို့တောက်ပ။ ပလတ်စတစ်: (အနိမ့် RI ကနှင့်အတူပျော့ပြောင်း) resins ၏ပုံမှန်တောက်ပ။ waxy: နီးပါးဆိုရင်တော့ Matte မျက်နှာပြင် (တခါတရံချောကျိကျိလို့ချေါ) ။ ချောကျိကျိ: တစ်ဏုကြမ်းတမ်းသောမြေမျက်နှာပြင်အားဖြင့်အလင်း၏ပြမှရရှိလာတဲ့ရှာဖွေနေအနည်းငယ်အဆီပြန်။ Pearly: ပုလဲ / မိခင်-of-ပုလဲ၏တောက်ပ။ တောက်ပ: ပိုး၏ fibrous တောက်ပ
Mabe (ယဉ်ကျေးမှု) ပုလဲ
မူရင်းနျူကလိယတစ်ဦးသေးငယ်စေ့ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အစားထိုးခဲ့သည့်အတွက်ပေါင်းစပ်ယဉ်အဖုအနာပုလဲအတွက်ခိုင်မြဲနှင့် Of-ပုလဲ mother- တစ်ဦးအမိုးခုံး-shaped အပိုင်းအစ nacre ချို့တဲ့ရသောအမှုသည်အဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်းရန်၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းလျှက်ရှိကြောင်း
သွန်းသော (အရည်) ကိုကျောက်
ပျော့နည်းလမ်းတစ်သံတူနှင့်အတူရိုက်နှက်သဖြင့်သို့မဟုတ် roller ၏ဖိအားများကတိုးချဲ့သို့မဟုတ်ပုံဖော်ခံရနိုင်စွမ်းဖြစ်ခြင်း
ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်လူတလုပ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာစက်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ခဲ့ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ (synthesize အတူတကွထားတစ်ခုသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးပြီးမြေတပြင်လုံးသို့ element တွေကိုပေါင်းစပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်) ။ အဆုံးရလဒ်တစ်ခုဒြပ်ကျောက်မျက်ရတနာ (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကသဘာဝ counterpart ရှိကြောင်းတစ်) သို့မဟုတ်တစ်ဦးအတုကျောက်မျက်ရတနာ (ဆိုလိုသည်မှာမရှိ, သဘာဝအ counterpart ရှိကြောင်းတစ်) ဖြစ်စေခြင်းငှါ
တစ်ဦးကြည်လင်၏အဓိပ္ပါယ် internai ဖွဲ့စည်းပုံမှာပိုင်ဆိုင်ပေမယ့်အပြင်ဂျီဩမေတြီပုံစံကိုမပြပါဘူးသောအရာပစ္စည်းကိုဖော်ပြရန်ဖို့အသုံးပြုသက်တမ်း။ ဤသည် (ဥပမာ, သလင်းကျောက်ထ) တစ်ဦး၏ရေးစပ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြည်လင်ယူနစ် (ဥပမာ, ကျောက်စိမ်း) ရနိုင်
ပစ္စည်းကိုအတွက်အသုံးပြုဟူသောဝေါဟာရတစ်ခုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း amorphous ပြည်နယ်တစ်ခုပုံဆောင်ခဲကနေချိုး-Down ခံစားခဲ့ရသည့်; ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများ (ဥပမာ, အနိမ့်အမျိုးအစား zircon) ပါဝင်တဲ့သတ္တုများအတွက်ဘုံ
အသွင်ပြောင်း (စာသား, form မှာပြောင်းလဲသွားတယ်) ကျောက်ဆောင်အဓိကအားဖြင့်ဖိအား, အပူနှင့် / သို့မဟုတ်အသစ်ဓါတုဗေဒပစ္စည်းများများ၏နိဒါန်း၏လုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့် Pre-လက်ရှိကျောက်တို့မှဖွဲ့စည်းကြသည်
တ ဦး တည်းမက်ထရစ်ကာရက် = ဂရမ်၏ငါးပုံတစ်ပုံ (0.20gr) သို့မဟုတ် 200 မီလီဂရမ် (mg) ။ မက်ထရစ်ကာရက်သည် ail ကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်ယဉ်ကျေးသောပုလဲများအတွက်အလေးချိန်ယူနစ်ဖြစ်သည်။ အလေးချိန်ကိုဒdecimalမကိန်းနှစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြပြီးဒသမကိန်းများကို“ points” ဟုခေါ်လေ့ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၁ မက်ထရစ်ကာရ = ၁၀၀ မှတ်
object တစ်ခုတစ်ဦးကိုချီးမြှင့် image ကိုထုတ်လုပ်သောမျက်ကပ်မှန်ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦး optical တူရိယာ။ ချဲ့၏ သာ. အရေးကြီးသောအသုံးပြုမှုတချို့က: (သဘာဝကလူလုပ် vs. ; ဖွဲ့စည်းရေး / ကျောက်သလင်းတိုးတက်မှု၏ mode ကို) ပါဝင်လေ့လာမှု; မျက်နှာပြင်စာမေးပွဲ (ဖြတ်၏အရည်အသွေး (symmetry), အရောင်ရှုထောငျ့အ (အခြေအနေများ, firemarks); ပေါင်းစပ်ကျောက်ခဲတို့ကို၏ထောက်လှမ်း; အတုကုသမှု၏ဖော်ထုတ်ခြင်း; (ဥပမာ, ကျိုးနှင့် / သို့မဟုတ် cleavage ၏မျက်မှောက်တော်) ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှအားနည်းချက် detect; နှစ်ဆ detect (SR vs ဒေါက်တာကိုလည်း birefringence ၏ပမာဏကိုညွှန်ပြနိုင်ပါသည်)
monochromatic အလင်းတစ်ဦးတည်းသာလှိုင်းအလျား၏အလင်းဖြစ်၏။ Refractometer တိုင်းတာရာတွင်အသုံးပြုစံအဝါရောင် monochromatic အလင်းတစ်ဦးဆိုဒီယမ်အခိုးအငွေ့ဆီမီးခွက်မှဆင်းသက်လာသည်။ ဤသည်အမှန်တကယ်အဘယ်သူ၏ယုတ်တန်ဖိုးကို 589.3nm သည်နှစ်ဦးသည်အလွန်နီးကပ်စွာလှပတဲ့ထုတ်လွှတ်လိုင်း, ပါဝင်ပါသည်
အရည်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် / သို့မဟုတ် crystals ဆံ့သောငှါပါဝင်နိုင်
အ mollusk shell ကိုအတွင်းရှိပုလဲနှင့်မိခင်-of-ပုလဲမျက်နှာပြင်နှစ်ခုလုံး၏အလျှံအလွှာဖြစ်ပေါ်လာသောအရာအချို့ mollusks ၏ဝတ်လုံကထုတ်လုပ်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု။ Nacre ထုံး၏ပုံဆောင်ခဲကာဗွန်နိတ်နဲ့ conchiolin လို့ခေါ်တဲ့အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းပါဝင်ပါသည်
လျှပ်စစ်သံလိုက်ရောင်စဉ် (တောက်ပသောစွမ်းအင်) ၏တိုတောင်းလှိုင်းအလျားသည်အတိုင်းတာခြင်း၏ယူနစ်။ တစ်မီလီမီတာ (1 / 1 nm) ဥပမာ၏ 1 nanometer = 1,000,000 millioneth အစိတ်အပိုင်း, မြင်နိုင်သောအလင်း 700nm (အနီ) နှင့် 400nm (ခရမ်းရောင်) အကြားကျရောက်
တစ်ဦးပုံဆောင်ခဲအသွင်သဏ္ဌာန်ရှိခြင်းကျောက်မျက်အတွင်းအခေါင်းပေါက်။ ဤရွေ့ကားအခေါင်းပေါက် (အနုတ် crystals မကြာခဏ darkfield illumination အောက်မှာသူတို့ host ကိုထက်ပိုမိုပေါ့ပါးပေါ်လာ) အချို့သောဒေသများတစ်ပျက်ပြယ်ဖွဲ့စည်းနှင့် enclosing, အခြားဒေသများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်မှုနှုန်းမှာကြီးပြင်းလာသောအခါဖန်တီးခဲ့ကြခြင်းသို့မဟုတ်မူရင်းကြည်လင်ပါဝင်ထွက်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးဘယ်မှာ
တစ်ဦး refractometer အပေါ်စမ်းသပ်မှုအောက်တွင်ကျောက်တူရိယာများ၏အကွာအဝေးအထက်တစ်ဦး R.1 ရှိပါတယ်လျှင်အဘယ်သူမျှမအရိပ်အစွန်း (အအဆက်အသွယ်အရည်၏ မှလွဲ. ) မြင်ကြပါလိမ့်မည်
သတ္တုဓာတ်နှင့်အခြားပစ္စည်းများ (စာသား, Form မပါဘဲ) သောအခါဂျက်တစ်ခုစနစ်တကျ internai အနုမြူဗုံးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဂျီဩမေတြီပုံမှန်ပြင်အသွင်အပြင် (ဥပမာ, တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ, opal နှင့်ဖန်ထည်အဖြစ်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ) Non-ပုံဆောင်ခဲသို့မဟုတ် amorphous ဖြစ်ဟုဆိုသည်
Non-အဖြူအလင်း (ဆိုလိုသည်မှာ, ရောင်စုံ) က၎င်း၏က hue (ဆိုလိုသည်မှာ၎င်း၏ Pre-ကြီးစိုးလှိုင်းအလျား၏အရောင်), ရွှဲ (လွှမ်းမိုးအရောင်များ၏အတိမ်အနက်ကိုသို့မဟုတ်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ) နှင့်သေံ (မှောင်မိုက်ဖို့အရိပ်-အလင်း) ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖော်ပြခဲ့သည်
မှန်ဘီလူး ail ထောင့်ရှိအကပုံမှန်မှတိုင်းတာ, ညာထောင့်ကနေရေးဆွဲထားတဲ့စိတ်ကူးယဉ်လိုင်း (ထိုရောင်ခြည်မျက်နှာပြင်ကိုယ်တိုင်ကအနေဖြင့်မျက်နှာပြင်ရိုက်နှင့်မဘယ်မှာ 90 အမှတ်များမှာ
တစ်ဦးမဟုတ်ရင်နှစ်ထပ်ကွမ်းယိုင်ကြည်လင်အတွင်းတစ်ခုတည်းသောအလင်းယိုင်တဲ့ညှနျကွားခတစ် optic င်ရိုးအဖြစ်လူသိများသည်
anisotropic ပစ္စည်းကိုတစ်ဦး optic ဝင်ရိုးတလျှောက်မြင်ကြဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပုံစံများကိုဖြေရှင်းကူညီတဲ့ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှန်ဘီလူးအဖြစ်ပြုမူသောတိုတောင်းတဲ့ကြိမ်လုံးတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်တစ်ဖန်နယ်ပယ်
တစ်ဦးဓာတ်သတ္တု၏ optic သဘာဝ: သတ္တုဓာတ်, uniaxial biaxial နှင့် isotropic (optic ဇာတ်ကောင်) သို့ခွဲခြားထားတယ်။ Uniaxial နှင့် biaxial သတ္တုဓာတ်နောက်ထပ်တာတော့အပြုသဘောဆောင်သောသူတို့အားနဲ့ optical အနုတ် (optic နိမိတ်လက္ခဏာကို) သောသူတို့အားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်
optical သိပ်သည်းဆအလင်း၏ဆငျးသကျနှေးမှာသူ့ဟာသူ demonstates သောရှုပ်ထွေးသောအိမ်ခြံမြေဖြစ်ပါတယ်။ (စအလင်းယိုင်ကြည့်ပါ)
ကျောက်မျက်ပုလဲနှင့်မိခင်-of-ပုလဲ၏လျှံမျက်နှာပြင်ရောင်။ ဒါဟာပါးလွှာသောဇာတ်ကား (အ nacreous အလွှာ၏ပါးလွှာသောပြား) မှာအလင်း၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများကများနှင့်ပြား၏ဒဏ်ငွေအနားကနေ diffraction ကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်
ဒီသက်တမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏ sait ရေ mollusks ၌တွေ့သည့်သဘာဝပုလဲဖော်ပြမှကန့်သတ်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အရှေ့တိုင်းအဖြစ်အတန်းအစား ail ရေငန်ကသဘာဝပုလဲဖို့ပိုပြီးယေဘုယျကုန်သွယ်မှုထုံးစံခဲ့
နှုတ်ဆက်တဲ့ကျောက်သလင်းမျက်နှာများမှစင်ပြိုင်မဟုတ်ဘဲလေယာဉ်တလျှောက်ခြင်းထက်, အားနည်းခြင်း၏လေယာဉ်တလျှောက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကျိုးပဲ့ပျက်စီးမှု, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်
cleavage အတွက် (ကလည်းအယူမှား cleavage အဖြစ်လူသိများသည်) အဖြစ်ကြည်လင်, ရင်ဆိုင်နေရ
ပုလဲဘောဇဉ်ပုလဲအလေးချိန် 1 ဘောဇဉ် = 0.25 ကာရက် (1 CT = 4grains) အတွက်စံယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်
ပုလဲ mollusks ၏အတွင်းပိုင်း၌, မတော်တဆနှင့်မဆိုလူ့အေဂျင်စီများ၏အကူအညီမပါဘဲလျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်ဖြင့်သဘာဝဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအများအားဖြင့် nacreous များမှာပြင်ဘက်မှာသောအာရုံစူးစိုက်မှုအလွှာအတွက်စီစဉ်ပေး (များသောအားဖြင့် aragonite ၏ပုံစံအတွက်) တစ်ဦးအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းဥစ္စာ (conchiolin အမည်ရှိ scleroprotein) နှင့်ကယ်လ်စီယမ်ကာဗွန်နိတ်၏ရေးစပ်ကြသည်
မကြာခဏကြီးမားသောကျောက်မျက်ရတနာ၏ crystals (ဥပမာ, ကားမျက်ရွဲ, chrysoberyl, feldspar, သလင်းကျောက်, spessartite garnet) အပါအဝင်ရှားပါးသတ္တုဓာတ်, င်ကြမ်းအမြတ်၏များမှာမီးသင့်ကျောက်
phosphorescence (ဆိုလိုသည်မှာကြောင့်တစ်ဦး afterglow သည်) အကျိုးသက်ရောက်နှောင့်နှေးချောင်း၌ရှိ၏။ ဓါတ်ရောင်ခြည် energizing ၏အရင်းအမြစ်စဲပြီးဒါဟာမြင်နိုင်အလင်း၏ဆက်လက်ထုတ်လွှတ်သည်
photoluminescence ချောင်းနှင့် phosphorescence များအတွက်စုပေါင်းသက်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရေတိုလှိုင်းအလျားဓါတ်ရောင်ခြည် (အမြင်သာ (အပြာထဲမှာဥပမာလျှပ်စစ်သံလိုက်ဓါတ်ရောင်ခြည်), အရောင်စဉ်၏ခရမ်းလွန်ခြင်းနှင့်က x-ray အစိတ်အပိုင်း) နှင့်ထိတွေ့ခံရအပေါ်သို့မြင်နိုင်အလင်းထုတ်လုပ်အချို့ပစ္စည်းများအားဖြင့်ပြအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်
placer သိုက်မိဘကျောက်ရာသီဥတုကဖွဲ့စည်းပြီးသောမြင့်မားတိကျတဲ့ဆွဲငင်အား (နှင့်ကြာရှည်ခံမှု) ၏အဖိုးတန်သတ္တုဓာတ်၏မျက်နှာပြင်ပြင်းအားထားရှိရေးနှင့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်, နောက်ပိုင်းတွင်စမ်းချောင်းသို့မဟုတ်လှိုင်းလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်ပို့ဆောင်ခဲ့
symmetry ၏ဒြပ်စင်၏တစ်; symmetry ၏လေယာဉ် (ဆိုလိုသည်မှာစီအစိတ်အပိုင်းအခြားများ၏အတိအကျကိုပြောင်းပြန် counterpart သည်) တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အစိတ်အပိုင်းကအခြားအစိတ်အပိုင်းများ၏ရောင်ပြန်ဟပ် (ကြေးမုံ) ပုံသဏ္ဌာန်နိုင်အောင်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုစခန်ဓာကိုယ်ကိုပိုင်းခြားသည့်စိတ်ကူးယဉ်လေယာဉ်သည်
အပူနှင့် / သို့မဟုတ်ဖိအားပေးမှုအားဖြင့် extruded သို့မဟုတ်ပုံသွင်းနိုင်သည့်အော်ဂဲနစ်လူလုပ်တ္ထုများ၏နံပါတ် (များသောအားဖြင့်တစ်ဦးဗဓေလသစ်အခြေစိုက်ပေါ်လီမာ) အတွက်အထွေထွေသက်တမ်း
အရောင်၏ Play စ
အရောင်များ၏သက်တမ်းကစားအလင်းပါးလွှာသောရုပ်ရှင်ကားမှသို့မဟုတ်အဖိုးတန် opal ၏အနည်းကိန်းရာဇမတ်ကွက်ကဲ့သို့ဖွဲ့စည်းပုံမှာမှထင်ဟပ်သောအခါမြင်ကြအရောင်များ၏စီးရီးဖော်ပြသည်။ (အလင်းသေးငယ်တဲ့ aperture ဖြတ်သန်းအဖြစ်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအရောင်များသို့အဖြူအလင်း၏ကြေကွဲအထိ) ဒါဟာအလင်း၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတစ်ခုအထူးပြုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သော diffraction ကထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
pleochroism (စာသား, များစွာသောရောင်စုံ) ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးကြည်လင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာမှ (ဆိုလိုသည်မှာ, နှစ်ထပ်ကွမ်း refracting ကြသည်) အလင်းကွဲကြောင်းအချို့သောရောင်စုံကျောက်ခဲတို့ကိုတွေ့မြင်စေခြင်းငှါအရာကွဲပြားခြားနားတဲ့ directional အရောင်များကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောယေဘုယျသက်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ (သုံးရောင်စုံ) dichroism (နှစ်ခုရောင်စုံ) နှင့် trichroism လည်းပါဝင်သည်
အ polariscope သူတို့ကိုအကြားတစ်ဦးအလှည့်အဆင့်နှင့်အတူစီစဉ်ပေးလေယာဉ်သဘောကွဲလွဲအလင်း၏ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်နှစ်ဦးယူနစ်ပါဝင်သောလက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းကိုဆွတ်သို့မဟုတ်နှစ်ထပ်ကွမ်းယိုင်သည်သာဖြစ်စေမကိရိယာစမ်းသပ်မှု
ဆွတ်ယိုင်-ပစ္စည်းကိုအလှည့်°တစ် 360 တစ်လျှောက်လုံးမှောင်မိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ပစ္စည်း internai strain အောက်ပါကများသောအားဖြင့်ထူ ထပ်. ခညျြနှောငျသို့မဟုတ်မမှန်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ၏ပုံစံအတွက်, ပုံမှန်မဟုတ် (အယူမှား) ကို double အလင်းယိုင် (ADR) ကိုပြသလိမ့်မည်။ တစ်ခုတည်းကျောက်သလင်းကနေဖြတ်နှစ်ချက်ယိုင်-ကျောက်ခဲတို့ကိုအလင်း၏လေးရာထူးနှင့်မှောင်မိုက်၏အလေးရာထူးရှိသည်။ ပုံဆောင်ခဲစုစုပေါငျးမြားသို့မဟုတ်အကြီးအကျယ် DR ပစ္စည်းကိုအလှည့်°တစ် 360 တစ်လျှောက်လုံး ail အလင်းထင်ရှားစေခြင်းငှါပါဝင်သည်။ အခြေအနေမှန်များနှင့်တစ်ဦးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိန်းဂဏန်းသတိပြုလျှင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိန်းဂဏန်း-in ကို DR ပစ္စည်းများ၏အမှု, ကကျောက်ကို uniaxial သို့မဟုတ် biaxial ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ (optic နိမိတ်လက္ခဏာ-တစ်ချိန်က်ရောက်စွက်ဖက်ပုံကိုတွေ့တော်မူပြီးမှ, ကထိုကျောက်၏အကူအညီနှင့်အတူအပြုသဘောသို့မဟုတ်အနုတ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်
သေးငယ်တဲ့ crystals ၏စုစုပေါငျးမြားသောသတ္တုဓာတ် polycrystalline ချေါကြသည်။ ဤရွေ့ကားသေးငယ်တဲ့ crystals (နီးပါးကျောက်စိမ်းကျောက်စိမ်း ail ဥပမာ) တယောက်တည်းမျက်စိအားဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံချဲ့သုံးပြီးသတိပြုနှင့်နိုင်ပါတယ်
Potch (ဘုံ opal)
ညီမျှမှုအရွယ်အစား silica နယ်ပယ်များရေးစပ်အရောင်၏ကစားချို့တဲ့ရသောအမှုသည်အ milky ပစ္စည်းများ, အားဖြင့်အလင်းကိုအရပ်ရပ်ကွဲပြားစေခြင်းထက် diffracted ခံရဖို့ဖြစ်စေတဲ့
ယခင်ကပါဝင်မှုများ - host crystal မပေါ်ပေါက်မှီတည်ရှိခဲ့သူများနှင့်အဆုံးတွင် 'အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသော' များထဲသို့ထည့်သွင်းခြင်းခံထားရသောအရာများ (ဥပမာအစိုင်အခဲအမှုန်များနှင့်သေးငယ်သော crystals များ။ ၎င်းတို့သည်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲတစ်လျှောက်လုံးပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် host crystal နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်သည်) ဖွဲ့စည်းပုံ
pseudomorph (မှားယွင်းသောပုံစံ) သည်အပူနှင့် / သို့မဟုတ်ဖိအားများသို့မဟုတ်ဓာတုဖြစ်စဉ်များကြောင့်အခြားဓာတ်သတ္တု (သို့မဟုတ်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်း) ၏ပုံစံ (ပုံသဏ္)ာန်) ကိုယူသောဓာတ်သတ္တုဖြစ်သည်။ ဥပမာကျား၏မျက်စိ (asbestos တွင်းထွက်ကော့စ်ဒိုက်သတ္တု) ။ သစ်သား agate (သစ်သားတစ်လင်းကျောက်အစားထိုး)
ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဆိုသည်မှာထိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအချို့သောမျက်နှာပြင်များ (internai (သို့) ပြင်ပ) များမှပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Snell ရဲ့ဥပဒေကိုလည်းကြည့်ပါ
အလင်းပြန်ခြင်းသည်မီဒီယာတစ်ခုမှအခြားတစ်ခြားကွဲပြားခြားနားသော optical သိပ်သည်းဆ (သို့မီဒီယမ်နှစ်ခု၏ဘုံမျက်နှာပြင်ကို ၉၀ ဒီဂရီထိထိုးနှက်သောအခါမှလွဲလျှင်) အလင်းသည်သွားလာသည့်လမ်းကြောင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ အလင်းသည်ပိုမိုရှားရှားပါးပါးမှပိုမိုသိပ်သည်းသောအလယ်အလတ်သို့ (ဥပမာ၊ လေမှကျောက်တုံးသို့) ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ၎င်းသည်ပုံမှန်ဆီသို့ ဦး တည်သွားသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ပိုမိုသိပ်သည်းမှ ပို၍ ရှားပါးသောအလယ်အလတ်သို့ဖြတ်သွားသည်နှင့်ပုံမှန်မှဝေးသွားသည်။ Optical သိပ်သည်းဆသည်ရှုပ်ထွေးသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလင်းနှေးခြင်းတွင်မိမိကိုယ်ကိုပြသသည်။ Snell ရဲ့ဥပဒေကိုလည်းကြည့်ပါ
မျက်စိအလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း (RI က)
အ RI ကပေးထားသောကြားခံအတွက်အလင်း၏အမြန်နှုန်းမှလေထဲတွင်အလင်း၏အမြန်နှုန်းကိုနှိုင်းယှဉ်ရိုးရှင်းတဲ့အချိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိအလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်းကိုတိုင်းတာရာတွင်အသုံးပြုစံလေကြောင်း (တင်းကြပ်စွာတစ်လေဟာနယ်) ဖြစ်ပါသည်; ဤသို့လေကြောင်း၏ RI ကဖြစ်စဉ်းစားသည် 1.00
တိုးမြှင့်အပူချိန်မှာ Pre-ရှိပြီးသားကျောက်တွင်းထွက်အကြောင်းအရာ recrystallization (700 ° -2000 ° C) နဲ့ဖိအားအောက်မှာ
တိကျတဲ့ဆွဲငင်အား (SG) ကိုကြည့်ပါ
ကျန်နေတဲ့လှိုင်းအလျားသူတို့အားလှိုင်းအလျားကျွန်တော်တို့ကို object တစ်ခု၏ Perce-eived အရောင်ပေးဖို့ပေါင်းစပ်ထားသည့်ပစ္စည်းကိုကစုပ်ယူကြသည်မဟုတ်
ပွင့်လင်းရှုထောငျ့ကျောက် Brilliance တောက်တွင်တွေ့မြင်အရောင်များ၏အရည်အသွေးသို့မဟုတ်ပြင်းထန်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်
sparkling, အလင်း၏အတို, တောက်တောက်တောက်၏ချွတ်ပေး
sectile ချောမွေ့ဖြတ်အတူဓါးဖွငျ့ peeled ခံ၏ပစ္စည်းများကိုစွမ်းရည်ကိုရည်ညွှန်းသည်
ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်ရှိကျောက်တုံးများအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဗေဒပိုင်းဆိုင်ရာပြိုကွဲမှုမှဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်း (အနည်အနှစ်များ) တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအရာများ
အလွန်သေးငယ်တဲ့ပုလဲ (းထက်လျော့နည်း။ စပါးကို / ခန့်။ 2mm) သဘာဝသဲ၏အစေ့၏ကျူးကျော်၏ရလဒ်အဖြစ် mollusk ၏ပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးဖွဲ့စည်းကြသည်, အခမဲ့ရေပေါ်ဥ, ကပ်ပါးကောင်များသို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံခြားအလောင်းကောင်။ အမျိုးအနွယ်ကိုပုလဲများသောအားဖြင့်မမှန်ခြင်းနှင့်အပြားရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရှားပါးလှည့်လည်သူမြားကိုတှေ့ရှိရသောအခါ, လက်ဝတ်ရတနာအတွက်အသုံးထွက်သည်ကွဲကွာကြသည်။ Keshi ပုလဲလည်းကြည့်ရှုပါ
အလင်း၏ရွေးချယ်စုပ်ယူအလင်းကို object တစ်ခုဖြတ်သန်းသို့မဟုတ်၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပယ်ထင်ဟပ်ကနေဖိနှိပ်မှုသို့မဟုတ်အချို့သောလှိုင်းအလျား၏စုပ်ယူသည်။ မျက်စိရောက်ရှိသောကျန်ရှိသော (ကျန်နေတဲ့) လှိုင်းအလျားကနေပစ္စည်းရလဒ်များကို၏အရောင်
ရောင်နေတဲ့ကြောကျခဲအတွင်းပါဝင်နိုင်သို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်တွေကနေရောင်ပြန်ဟပ်လျှက်အလင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တစ် shimmering သို့မဟုတ်ပျံ့ (ဖြန့်) ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ အဆိုပါသက်တမ်း (opal အတွက်အရောင်၏ labrodrescence နှင့်ကစား) chatoyancy, Aster, adularescence, aventurescence, opalescence, လျှံလည်းပါဝင်သည်
ဒဏ်ငွေအပြိုင်တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်၏တစ်ဦးစီးရီး (မကြာခဏသော Rutile)
လည်း isotropic အဖြစ်ရည်ညွှန်း။ ail လမ်းညွန်၌တူညီသော optical ဂုဏ်သတ္တိများပြသောသတ္တုဓာတ် (ကုဗစနစ်နှင့် amorphous ပစ္စည်းကိုအတွက်ဥပမာကျောက်ခဲ)
အလင်းယိုင်၏ Snell ရဲ့ဥပဒေ
တစ်ဦးအလင်းရောင်ခြည်ရှိအခြားသို့တစ်အလယ်အလတ်ကနေဖြတ်သန်းလာသောအခါဖြစ်ပွားမှု၏ထောင့်၏၏ sine နှင့်အလင်းယိုင်၏ထောင့်၏၏ sine အကြားတစ်ဦးအဓိပ္ပါယ်အချိုးအစားရှိနေပြီ။ (ဖြစ်ပွားမှု၏အချက်မှာ) ထိုအဖြစ်အပျက်ရောင်ခြည်, အ refracted ray နဲ့ပုံမှန်အတူတူလေယာဉ်အတွက် ail ဖြစ်ကြသည်။ optical အဆက်အသွယ်မဆိုနှစ်ခုမီဒီယာများ၏ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အလင်းယိုင်၏ထောင့်အကြားအဆက်မပြတ်အချိုးအစားအယိုင်ညွှန်းကိန်း (RI က) Snell ဖြင့်သင့်ကိုခေါ်ခဲ့သည်
12 သို့မဟုတ်ပင် 16mm တစ်ဦးချင်းနှင့်အတူငွေ lipped ပုလဲခရစ်ယာန်ယဉ်ကျေးမှုကုမ္ပဏီကြီးယဉ်ပုလဲ, ။ သူတို့မူလက Micron-SIA နှင့်အင်ဒိုနီးရှားအတွက်ဂျပန်ကထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသောကြောင့်, ဤရွေ့ကားကြီးတွေအဖြူပုလဲနာမကိုတောင်ပင်လယ်ရရှိခဲ့သည်။ ဒီနေ့သည်ဤပုလဲပိုပြီးမကြာခဏလျော့နည်းအရေးကြီးသောသတင်းရင်းမြစ်အဖြစ်အင်ဒိုနီးရှား, ဖိလစ်ပိုင်, ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်အတူသြစတြေးလျနှင့်မြန်မာထုတ်လုပ်နေကြပါတယ်။ ယနေ့အထိမိခင်ခရစ်ယာန်များ၏ထောက်ပံ့ရေးန့်အသတ်နှင့်စျေးနှုန်းများအညီမြင့်မားဆိုလိုတာကငွေ-lipped ပုလဲခရစ်ယာန်တစ်ဦးအောင်မြင်သောအတုအငြင်းပွားမှုစုဆောင်းခြင်း, ရှိခဲ့မရှိသေးပါဘူး
SG သို့မဟုတ်ပစ္စည်းတစ်ခု၏ဆွေမျိုးသိပ်သည်းဆသည် ၀ တ္ထု၏အလေးချိန်နှင့် ၄ စင်တီဂရိတ် (ရေ၏အမြင့်ဆုံးသိပ်သည်းဆ) နှင့်ပုံမှန်လေထုဖိအားတို့တွင်တူညီသောစင်ကြယ်သောရေ၏အလေးချိန်အကြားအချိုးဖြစ်သည်။ စင်ကာပူဒေါ်လာသည်ပစ္စည်း၏ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုအပြင်အက်တမ်အချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည် (အကျိုးသက်ရောက်မှုအနေဖြင့်၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းဒြပ်စင်များ၏အနုမြူအလေးချိန်သာမကအက်တမ်များအတူတကွထားသည့်ပုံစံနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်)
တစ်ဦး Prism သို့မဟုတ် diffraction ဆန်ခါအားဖွငျ့က၎င်း၏မဲဆန္ဒနယ်လှိုင်းအလျားသို့မဟုတ်ရောင်စဉ်အရောင်များသို့အလင်း၏တစ်ဦးရောင်ခြည်ကိုခြားနားစေသောအရာတခုတူရိယာ။ အဆိုပါ spectroscope တစ်အဖြူအလင်း၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍများ (လိုင်းများသို့မဟုတ်ခညျြနှောငျ) သို့မဟုတ်ဒေသများ (ကျယ်ပြန့်စုပ်ယူ) စမ်းသပ်မှု (မ ail အောက်မှာပိတ်သောကျောက်ထဲကနေတဆင့်ကူးစက်သို့မဟုတ်ထင်ဟပ်ခဲ့ကြရသောကျန်နေတဲ့လှိုင်းအလျားမီးသေနတ်များသို့မဟုတ်ထွက်ပြန့်ပွားအားဖြင့်တစ်ဦးကျောက်မျက်ကစုပ်ယူသောမြင်ရဖို့ခွင့်ပြု ကျောက်ခဲတို့ကို) မြင်ကြတဲ့ရောင်စဉ်နှင့် ail မ spectrum ရောဂါရှာဖွေဒါပေမဲ့စုပ်ယူခညျြနှောအဖြစ်လည်းအေးဂျင့်သို့မဟုတ်အချို့သောဒြပ်စင်၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြစေခြင်းငှါဖြစ်ကြောင်းပြသ
symmetry နှစ်ဦးစလုံးမကျြနှာကို-up ကအနေအထားနှင့်ပရိုဖိုင်းအတွက်ကျောက်မျက်များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်၏ regularity သို့မဟုတ်ချိန်ခွင်လျှာကိုရည်ညွှန်းသည်
ခေတ်ပြိုင်အိမ်ရှင် crystai (ဥပမာ, ဓာတ်သတ္တုစိုင်အခဲအခြေအနေအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာတင်ပြခဲ့ကြရာဝတ္ထုများပါဝင်သည်ဟုပါဝင်နိုင်; အခေါင်းပေါက်ထဲမှာအရည်နှင့်အက်ကြောင်းငြိမ်းစေလျက်, zonal ခညျြနှော; အရည်ပါဝင်နိုင်; ထိုကဲ့သို့သောအရောင်ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အမွှာဖွဲ့စည်းခြင်းအဖြစ်တိုးတက်မှု၏သဲလွန်စတစ်ခုမကြာခဏရှိပါတယ်။ နှစ်ခု crystallographic ဥပဒေများဖြင့်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦးကြားဆက်ဆံရေးကိုခံရစေခြင်းငှါဒါ syngenetic အားလုံးပါဝင်တဲ့အိမ်ရှင်ကျောက်သလင်းအကြား intergrowth အမိန့်
ဓာတုထုတ်ကုန် (စသည်တို့ကိုဥပမာဒြပ်ကားမြ, ဒြပ် corundum,) ဟာသူ့ရဲ့သဘာဝအ counterpart ကဲ့သို့တူညီသောဓာတုဖွဲ့စည်းမှု, အနုမြူဗုံးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်
ဇွဲသို့မဟုတ်ခိုင်မာခြင်းခြိုးဖောကျသို့မဟုတ်ကျိုးနေတဲ့ကျောက်မျက်များ၏ခုခံသည်။ ဒါဟာ internai ဖွဲ့စည်းပုံမှာပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲလှုပ်စုပ်ယူရန်သတ္တုဓာတ်တတ်နိုင်သမျှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ်စတှငျနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ, ကျွတ်ဆတ် sectile ပျော့ပြောင်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့် elastic ပါဝင်
သေံ (ကက hue ၏ရှိမရှိသို့မဟုတ်အနက်ရောင်မှအဖြူ၏) ရိပ်မိ၏ဆွေမျိုးလျှပ်သို့မဟုတ်မှောင်မိုက်ကိုရညျညှနျး
စုစုပေါင်းပြည်တွင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိရာဝေဖန်ထောင့်ကရောင်ပြန်ဟပ်မှု၏နိယာမနားထောင်သောသူအဘယ်မှာရှိသိပ်သည်းအလတ်စားမှပြန်လာသောသည်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည့်ထောင့်မှာအလွန်ရှားပါးတဲ့အလတ်စားတစ်ခုသိပ်သည်းကနေအလင်းသွားတာတဲ့, ရောင်ခြည်ဖြစ်ပေါ်
နာမတော်ကိုမ idiochromatic နှင့် allochromatic ကျောက်ခဲတို့ကိုထဲမှာအလင်း၏ရွေးချယ်စုပ်ယူဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အနုမြူဗုံးဖွဲ့စည်းပုံမှာမှအရာ, အခြို့သောသတ္တုဒြပ်စင်ဖို့လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ သူတို့က chrome, ကိုဘော့, ကြေးနီ, ဗန်နာဒီယမ်, မန်းဂနိစ်, သံ, နီကယ်နှင့်တိုက်တေနီယမ်များမှာ
တယောက်ကိုတယောက်အလတ်ကနေ (ဥပမာ, အလင်း) သွား; (ဥပမာတစ်အချက်ပြမှု) ထွက်ပေးပို့သို့မဟုတ် (e..g ။ , လူတစ်ဦးမှအခြားမှ) အပေါ်ပို့ပေးရန်
အလင်းကိုကျောက်ရှောက်သို့မဟုတ်ကူးစက်ထားတဲ့နှင့်အတူလွတ်လပ်ခွင့်။ င့်လင်းမြင်သာခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီအဖြစ်ပေးအပ်ကြသည်: ပွင့်လင်း (TP) -a ပွင့်လင်းအရာဝတ္ထုကိုရောင်ပြန်ဟပ်နှင့်ကအပေါ်ကျရောက်သောအလင်း၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုစုပ်ယူသျောလညျးအမြားစုကိုရှောက်သွားခွင့်ပြုပါတယ်။ ကျောက်ကိုတဆင့်ကြည့်ရှုအားပေး object တစ်ခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကွဲပြားပုံပေါ်ပါတယ်။ sub-ပွင့်လင်း (S-TP) အလင်း၏ -a စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏကိုကျောက်ကိုတဆင့်မှတဆင့်ကူးစက်သောသော်လည်း, ထိုကျောက်၏အခြားဘက်ခြမ်းတခုတခုအပေါ်မှာအရာဝတ္ထုသာအကြမ်းဖျင်းခွဲခြားမရနိုင်ပါ။ sub-translucent (S-TL) -only အလင်း၏တစ်ဦးအလွန်သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုအပါးလွှာအနားမှာကျောက်မျက်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းမြင်သာအရာဝတ္ထုပေါ်သို့ကျရောက်သောအလငျး၏ -ail (0) နှင့်ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းမြင်သာဖြစ်စေသည်ရောင်ပြန်ဟပ်သို့မဟုတ်စုပ်ယူ။ အဘယ်သူမျှမအလင်းပင်ပိန်အနားမှာ, ပစ္စည်းဖြတ်သန်း။
တစ်အပူလှိုင်းသို့မဟုတ်အရောင်၏ roiled အကျိုးသက်ရောက်မှု-wisps နှင့်လောကဓာတ်
တစ်ဦးအမွှာကျောက်သလင်း (အဆက်အသွယ်အမွှာနှင့် interpenetrant အမွှာကြည့်ပါ) တူညီသောကြည်လင်နှစ်ယောက်ရှက်သို့မဟုတ်အချင်းချင်းတစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက် crystallographic ဆက်ဆံရေးကိုရှိသည်နှင့်တစ်အချိုးကျထုံးစံ၌အတူတကွစိုက်ပျိုးပြီးသောတူညီသောမျိုးစိတ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော crystals ၏ရေးစပ်ထားတဲ့တစ်ဦးကြည်လင်ဖြစ်ပါသည်
ခရမ်းလွန်ခရမ်းရောင်ထက်ကျော်လွန်ကိုဆိုလိုသည်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်၏ဤအကွာအဝေးခရမ်းရောင်အလင်း၏ 400nm ထက်ပိုမိုတိုတောင်းဖြစ်ကြောင်းလှိုင်းအလျားနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်
ထီဂagonနှင့် trigragonal crystal စနစ်များတွင် optic axis (single refraction ၏ ဦး တည်ချက်) ရှိသည်။ ဤစနစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောဓာတ်သတ္တုများကို uniaxial ဟုခေါ်သည် (uniaxial ကျောက်များ၌ optic axis အဓိကဒေါင်လိုက် 'c' ဝင်ရိုးနှင့်အပြိုင်)
ဆဲကြည်လင်၏ဝိသေသဂုဏ်သတ္တိကိုပိုင်ဆိုင်သည့်ကျောက်သလင်း၏အသေးငယ်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ကျောက်သလင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာ၏ယူနစ်ဆဲလ်တစ်ယူနစ်ဆဲလ်ချေါဖြစ်ပါတယ်။ ထိုယူနစ်ဆဲလ်မိခင်ဇာတိအားဖြင့် stacked ထားတဲ့အတွက်နည်းလမ်းအကြည်လင်၏ပြင်ပအသွင်အပြင်ဆုံးဖြတ်သည်
မြင်နိုင်သောအလင်းမျက်မှောက်၏အလွင်ပင်အရသာမှမြင့်တက်ပေးသောတောက်ပစွမ်းအင်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 400nm နှင့် 700nm အကြားကြောင်းလျှပ်စစ်သံလိုက်ဓါတ်ရောင်ခြည်၏မည်သည့်လှိုင်းအလျားအလင်းကဲ့သို့လူ့မျက်စိမြင်နိုင်သည်
အဖြူအလင်း (ရောထွေးအလင်း) ကိုမြင်နိုင်ရောင်စဉ် (အနီ, လိမ္မော်ရောင်, အဝါရောင်, အစိမ်း, အပြာနဲ့ခရမ်းရောင်) ကိုတက်စေပါသမျှသောအရောင်များသို့မဟုတ်လှိုင်းအလျားတစ်ဦးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တန်းတူအရောအနှောများရေးစပ်သည်။ အလင်း၏အရောင်လှိုင်းအလျားအပျေါမှာမူတည်ပါတယ်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်။ ဧဒုံလှိုင်းတံပိုးအရှည်ဆုံးလှိုင်းအလျား (700 + nm) ရှိသည်နှင့်ဤလှိုင်းအလျားခရမ်းရောင်မှရောင်စဉ်မှတဆင့်မှေးမှိန်, အတိုဆုံး (400nm-အကြောင်း 1 /4အနီရောင်ရောင်ခြည်၏အရှည်) ရှိသည်သော